Miyuli dia manolotra fika hanintona ny tanany avy ao amin'ny Twitter | Famoronana an-tserasera
ny ny tanana dia zavatra sarotra be atao sary. Raha ny marina, ireo mpanao hosodoko hosodoko kilasika dia nandao ny tànany ho an'ireo mpanampy azy ireo. Saingy noho ireo tetika lehibe nataon'i Miyuli dia ho mora kokoa ny zava-drehetra.
Ny zavatra dia tokony hananana tena hevitra momba izay ataontsika ary mampihatra lojika kelymankany Ny fahalalana ny vatan'olombelona, ​​miaraka amin'ny taolany sy ny hozany, dia zava-dehibe tokoa ary raha ny marina dia dinihina samirery izy io mba hahafahany manintona tsaratsara kokoa ny karazana posing rehetra.
Ny marina dia ireo bitsik'i Miyuli miaraka amin'ireo sary izay mampiseho ny tetika sasany hanoritana tanana dia sarobidy tokoa. Avy amin'ny tahaka ny felatanana, dia miolakolaka foana ny ivelany rehefa sokafana tanteraka, na toy ny hoho, rehefa lava izy ireo dia mirona hianjera any ambany.
Fanamarihana momba ny fanaovana sary tanana sy hoho pic.twitter.com/S2C20dWsfk
- miyuli ??? (@miyuliart) Aogositra 16, 2019
Toy izany koa no mitranga géometry fantsika izay mazàna dia telo mitsangana mahitsy misy fiampitana maro amin'ny zoro mba hitadidy foana ny endrik'io singa iray amin'ny rantsantanana io.
Ao amin'ny sary tsotra dia afaka mahita toro-hevitra vitsivitsy isika fa tsy maintsy arahintsika foana ny hahatakatra bebe kokoa ny fomba fanaovana tanana. Avy amin'ny fomba fijery sy rehefa miova avy hatrany ny fiolahana mankany amin'ny fitovian'ny rantsan-tànana izay matetika manampy ny halavany ny halaviran'ny felatanany mihitsy.
Arakaraka ny anolorantsika tena hatrany dia vao mainka mora kokoa amintsika ny manoratra tanana arakaraka ny anaovantsika sary. ary mandrakariva manana voafafa mora ampiasaina hamafana izay voasintona ratsy rehetra. Azonao atao ihany koa ny mahita ny tsy tokony hatao rehefa manao tànana araka ny natoron'ilay mpanao sary azy tamina andiana sioka.
Azonao atao ny manaraka azy hianatra ny hafetseny manaraka ka ho mahay ny fanaovana sary tanana daholo. Somary faharetana, talenta ary fikirizana ary ho anao izy ireo mba hahafahan'ireo tarehinao maneho hevitra sy tena misy. Mandao anao izahay miaraka amin'ireto handshakes Photoshop ireto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Fetsy sasany amin'ny fanaovana sary tanana nataon'i Miyuli
Ity fanavaozana ny toetran'ny The Lion King ity dia mampiseho ny olana amin'ny CGI